BETAFO : FANAHIANA HALA-JAZA NIAFARA TAMIN’NY SAVOROVORO SY FIFAMPITIFIRANALa dépêche de Madagascar
La dépêche de MadagascarFiainam-pirenena MALAGASY PEJY MALAGASYBETAFO : FANAHIANA HALA-JAZA NIAFARA TAMIN’NY SAVOROVORO SY FIFAMPITIFIRANA
BETAFO : FANAHIANA HALA-JAZA NIAFARA TAMIN’NY SAVOROVORO SY FIFAMPITIFIRANA
Nafana ny toe-draharaha tao Ambohimasina sy Manohisoa, kaominina roa samy ao amin’ny distrikan’i Betafo, tato anatin’ny 48 ora. Ankizilahy iray mpaka vilona no voalaza fa tafatsoaka avy eny Manohisoa ka nihazakazaka nitantara tamin’ny fokonolon’Ambohimahamasina fa nogiazana tsy tamin-tsitrapo tao amina ivon-toerana, voalaza ho misy mpanao asa soa, izay iandraiketana teratany vahiny, afak’omaly.
«Ireo mponin’Ambohimasina nilaza fa avy nangalarina io zazalahy io saingy tafaporitsaka. Izy ireo ihany anefa no mbola nitantara fa araka ny tatitr’io ankizy io dia mbola misy zazavavikely 5 voatazona an-keriny ao amin’ilay ivon-toerana», araka ny fampitam-baovao voaray avy amin’ny Zandarimaria any Betafo.
Noentin-katezerana sy noentim-po tamin’ny fitantarana nataon’ilay ankizy vokatr’izany ny fokonolona ka niandry kendritohina ny fiara ao amin’ilay ivon-toerana, izay tsy maintsy mandalo eo Ambohimasina alohan’ny hidirana an’i Manohisoa, afak’omaly hariva. Fiara tsy mataho-dàlana iray no nampitain’ny mpitandro ny filaminana fa nosakanan’ireo mponina ary ireo teratany malagasy roalahy tao anatiny kosa no saika niharan’ny fitsarambahoaka. Tonga nandamina ny raharaha anefa ireo mpitandro ny filaminana ary nitondra azy roalahy, saingy namotsotra azy ireo indray rehefa nilaza ho tsy nanana porofo momba ny fanahian’ireo fokonolona. Nihizingizina ny tsy maintsy hisava ilay ivontoerana eny amin’ny kaominina Manohisoa vokatr’izany ireo fokonolon’Ambohimasina ary voatery nanaraka sy nanamarina ny vaovao niely ireo mpitandro ny filaminana.
«Vao nahita ireo andian’olona sy mpitandro ny filaminana nihaodihaody sy nikasa ny hizaha ilay ivontoerana anefa ireo mpiambina dia nitifitra avy hatrany. Teo no vao mainka nihombo ny savorovoro», araka ny fampitam-baovao avy amin’ny mpitandro ny filaminana any Betafo, omaly nanodidina ny tamin’ny 5ora sy sasany.
Nanjaka tanteraka moa ny savorovoro tao Betafo hatramin’ny omaly hariva, tsy mbola fantatra izay naratra noho ilay fitifirana ary nilaza fa mbola mivory mahakasika io savorovoro io ireo mpitandro ny filaminana.
Partager la publication "BETAFO : FANAHIANA HALA-JAZA NIAFARA TAMIN’NY SAVOROVORO SY FIFAMPITIFIRANA"
jual perabot murah 12/11/2018 at 08:00 Repondre
jual perabot murah 12/11/2018 at 11:22 Repondre
jual perabot murah 12/11/2018 at 12:06 Repondre
jual perabot murah 12/11/2018 at 12:52 Repondre
jual perabot murah 12/11/2018 at 15:36 Repondre
nebena.com 26/11/2018 at 20:22 Repondre
Cecil Parda 11/12/2018 at 12:10 Repondre
click here 16/12/2018 at 21:59 Repondre
Eusebio Hoit 20/12/2018 at 23:38 Repondre
Rodney Sinks 22/12/2018 at 23:30 Repondre
Cedrick Rapozo 08/01/2019 at 13:43 Repondre
Pingback: homecoming ball gowns partywear collection womens
Gisela Novak 16/01/2019 at 13:28 Repondre
Armandina Ashworth 24/01/2019 at 15:37 Repondre
Ariel Buckle 15/02/2019 at 07:58 Repondre